Ilifa Amalungelo Nolo
Abanye kakhulu vala relatives a lomtshato eliseleyo kwaye ngamanye amaxesha abantwana okanye grandchildren banelungelo ibango ilifa, kwaye kwezinye iimeko, oku kunokwenziwa ngaphezulu into ithi yakho iza. Nantsi indlela esisebenza ngayo: ekuhlaleni ipropati states (Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, Enew Mexico, Texas, comment ingxwaba, Wisconsin, kwaye Alaska ukuba amaqabane ukutyikitya isivumelwano ukudala uluntu property) kuba kwezabo imigaqo malunga yintoni amaqabane owakhe kwaye ingaba ibango. Basically, ngamnye mlingane ngokuzenzekelayo owns nesiqingatha into mhlawumbi omnye earned ngexesha umtshato, ngaphandle kokuba baya kuba ebhalwe kwisivumelwano ukuba ephikisana. Ngamnye mlingane unako ukwenza nokuba lowo okanye yena likes kunye yakhe okanye yakhe kunye nesiqingatha-share zoluntu kwipropati kunye yakhe okanye yakhe ezahlukeneyo ipropati. (Kuba uncedo lokhetho ngaphandle yintoni zoluntu ipropati kwaye yintoni eyahlukileyo ipropati, khangela Umtshato Ipropati Ubunini: Ngubani Owns Ntoni.) Kuzo zonke ezinye states, akukho umthetho ukuba ipropati acquired ngexesha umtshato iphethwe omabini amaqabane. Kodwa ukukhusela amaqabane ukusuka ekubeni disinherited, uninzi lwezi states nika a lomtshato eliseleyo ilungelo ibango omnye anesithathu omnye-nesiqingatha mntu ubhubhileyo womlingane estate, akukho mcimbi oko kuya ibonelela. (Kuba ezinye kwezixhobo zokusebenza ngomhla yintoni a uza ayenze, khangela Into a Uza Uphumelele khange Senze.) Kwezinye states, isixa-mali lomtshato eliseleyo ingaba ibango kuxhomekeke njani ixesha elide i-ezimbalwa waba watshata. Ezi izibonelelo kick kwi kuphela ukuba survivor uya enkundleni kwaye amabango isabelo kuvunyelwe ngumthetho. Ukuba lomtshato eliseleyo akuthethi ukuba injongo ukuba kokufumana ngaphantsi, uza ngu honored njengoko kubhaliwe. Johanna ke ndiya kushiya dollazi, kuye wesine umyeni Fred, kwaye inxenye kuphumla wakhe ipropati, totaling phantse dollazi, phakathi kwayo ezintathu oonyana ukususela edlulileyo marriages. Ukuba Fred ngu ndonwabe kunye ilifa lakhe, yonke into iza kuhamba ngokomnqweno Johanna ke sicwangciso. Kodwa ukuba Fred ifuna ngaphezulu, unako ibango a share ka-Johanna ke ilifa kwaye get substantially ngaphezu dollazi. Ukuba lowo ingaba, Johanna abathathu oonyana uza kuthatha yintoni ekhohlo. Ukuba ufuna musa isicwangciso ukushiya ubuncinane nesiqingatha kwipropati yakho ukuba iqabane lakho yakho iya baze bangabi kumiselweyo kuye okanye yakhe generously ngaphandle yakho iza, kufuneka udibane a lawyer ngaphandle kokuba iqabane lakho willingly consents, ngokubhaliweyo, ukuba isicwangciso sakho. Ezininzi states, ifumana divorced ngokuzenzekelayo revokes izipho wenza ukuba umntu owayelilungu mlingane yakho iza.
Ngoko uyakwazi ngokulula shiya lowo ebeliqabane lakho ngaphandle yakho entsha iza.
Ngokubanzi, abantwana kuba akukho ilungelo ilifa nantoni na nabazali babo
Ngendlela ethile limited iimeko, nangona kunjalo, abantwana babe anelungelo lokuba ibango a share a mntu ubhubhileyo umzali ke ipropati. Umzekelo, Florida umgaqo-siseko prohibits intloko usapho ukusuka eshiya yakhe okanye yakhe yokuhlala ukuba nabani na enye ngaphandle mlingane okanye encinci umntwana ukuba noba ngu aphile.
Uninzi states ingaba ingaba imithetho ukukhusela ngokuchasene accidental disinheritance
Le mithetho idla kick kwi ukuba umntwana ozalwa emva kokuba umzali wenza ukuba uza kushiya ipropati ukuba abantwana bakokwenu, umzali zange revises intando ukuquka ukuba umntwana. Umthetho presumes ukuba umzali asikwazanga ube ujonge ukuba freeze ngaphandle uluhlu olutsha umntwana, kodwa nje ayifumananga jikelele ukuba revising intando. Kuloo meko, overlooked umntwana linokuba ilungelo ebalulekileyo yinxalenye umzali ke impahla yexabiso. Kwezinye states, le mithetho isicelo hayi kuphela abantwana, kodwa kanjalo na grandchildren yomntwana othe wafa. Xa usenza disinherit umntwana, okanye umntwana a mntu ubhubhileyo umntwana wakho uza kufuneka ukucacisa imeko yakho injongo. Kwaye ukuba ukhe omtsha umntwana emva kokuba anayithathela made yakho iza, khumbula ukwenza omtsha uza. Ukuqala ukwenza ucwangciselo ilifa namhlanje, khangela Quicken Uza umenzi Dibanisa, isoftwe meticulously yenzelwe nge Nalo ke isemthethweni abahleli ukunceda ukuba wenze unqwenela, ulondolozo lwempilo directives, nezinye vital ilifa ucwangciso amaxwebhu ngaphandle hiring umtshutshisi